वि. सं. २०७८ जेठ २६ गते, बुधवारको राशिफल - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ जेठ २६ गते, बुधवारको राशिफल
इनेप्लिज २०७८ जेठ २६ गते २:३० मा प्रकाशित
२०७८ जेठ २६ गते, बुधवार, ९ जुन २०२१। ज्येष्ठ कृष्णपक्ष चतुर्दशी तिथि (१३ः४१ बजेदेखि औंसी)। कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः ९ः०६ बजेदेखि राेहिणी। चन्द्रराशि– वृष।
तपाईँको अरूलाई आलोचना गर्ने बानीले स्वयं केही आलोचनाको सामना गर्नु पर्ने सम्भावना छ। आफ्नो हँसीखुशीलाई माथि र प्रतिरक्षालाई तल राख्नुहोस् र यसले तपाईंलाई अप्रकट टिप्पणीबाट मुक्त हुने राम्रो अवसर दिनेछ। आफ्नो घरको वरिपरि केही सफाईको तुरुन्तै आवश्यकता छ। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। प्रतियोगिता आएको हुनाले कार्य तालिका व्यस्त हुनेछ। तपाईंको चुम्बकीय – बहिर्गमन व्यक्तित्वले मानिसहरूको मन लोभ्याउनेछ। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी के अर्थमा लिनुभएको छ भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुहोस् र आज आफ्नो खर्च गर्नमा त्यति उदार हुने प्रयास नगर्नुहोस्। परिवारमा स्वास्थ्यको समस्या भएका कारणले पहिले बनाएका यात्रा कार्यक्रमहरू सर्न सक्छन्। वासनाको तीरबाट उम्कने मौका कम छ। महत्वपूर्ण मान्छेसँग अन्तरक्रिया गर्नाले तपाईंलाई राम्रो विचार र योजना ल्याउनेछ। आज तपाईंहरू दुवैमा एक-अर्का प्रतिका सुन्दर भावनाहरू धेरै नजिकबाट सञ्चार हुनेछन्।
तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। पारिवारिक जिम्मेवारीहरू बढ्नेछन् – जसले तपाईंको मनमा तनाउ ल्याउनेछ। तपाईं साँझ साथीहरूसँग बाहिर जानुभयो भने तत्काल रोमान्स आउन सक्छ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई स्वर्ग पृथ्वीमा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।
स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। तपाईंले आफ्नो अतिरिक्त पैसा आउने समयमा लाभ हुने सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। आफ्ना बच्चाको एउटा पुरस्कार समारोहमा निमन्त्रणा गरिएकोमा तपाईं आनन्दित हुनुहुनेछ। तपाईंले आशा गरे झैं उसले उन्नति गरेकोमा तपाईंको सपना साँचो भएको पाउनु हुनेछ। कामदेव तपाईंको जीवनलाई प्रेम प्रदान गर्न तपाईं तिरै आइरहेका छन्। तपाईंले आफ्नो वरिपरि के हुँदैछ भनेर सजग हुनु पर्नेछ। तपाईंले सधैं नै गर्न चाहेको काम आज कार्यालयमा गर्न पाउन सक्नु हुनेछ। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
इच्छा शक्तिको कमीले तपाईंलाई भावनात्मक र मनोवृत्तिको सिकार बनाउन सक्छ। साथीहरूसँगको सांझ अत्यधिक मनोरंजक र खुशीले भरिएको हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्दा कठिनाई हुनेछ। तपाईंले आज बनाएका नयाँ सम्पर्कले तपाईंको क्यारियरलाई नयाँ शक्ति दिनेछ। आज तपाईंका कुनै पनि योजना बनाउनु अघि आफ्नो जोडीलाई सोध्नुभएन भने, तपाईंलाई प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सक्छ।
सबैले भनेको सुन्नुहोस्, तपाईंका समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध जादुले भरिएको हुनेछ; मात्रै यसलाई महसुस गर्नुहोस्। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। तपाईं र तपाईंको जोडी आफ्ना साना मुद्दाहरूमा झगडा गर्नुहुनेछ तर यसले पछि गएर तपाईंको विवाह बर्बाद हुन सक्छ। अरूले भनेका वा सुझाव दिएका कुरामा भरोसा नगर्नुहोस्।
आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। सदस्यहरुसँगको सामाजिक भेटघाटले सबैलाई राम्रो मुडमा राख्नेछ। तपाईँले कति सुन्दर काम गर्नुभएको छ भन्ने देखाउन आज तपाईंको प्रेम फूल्नेछ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। तपाईंलाईले आफ्नो जोडीसित पुराना रमाइला रोमान्टिक दिनहरूको आज फेरि कदर गर्नु हुनेछ।
तपाईंले परिस्थितिलाई जित्नु भयो भने पीर हराउनेछ। तपाईंले यसलाई साहसको पहिलो स्पर्शमा फुट्ने साबुनको फोकाजस्तो हो भनेर बुझ्ने सम्भावना छ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। तपाईं आज उपस्थित भएको समारोहमा नयाँ मित्रता विकास हुनेछ। आत्मीय प्रेमको एक्स्टसी आज महसुस हुनेछ। यसको लागि केही समय लिनुहोस्। सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्न राम्रो तरिकाले योजना बनाउनुहोस् – कार्यालयको समस्या सल्टाउने प्रयास गर्दा तनाउले तपाईंको मन ढाकिदिन्छ। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस् – तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई साँच्चै विशेष केही किनिदिन सक्छन्।
तपाईँको अरूलाई आलोचना गर्ने बानीले स्वयं केही आलोचनाको सामना गर्नु पर्ने सम्भावना छ। आफ्नो हँसीखुशीलाई माथि र प्रतिरक्षालाई तल राख्नुहोस् र यसले तपाईंलाई अप्रकट टिप्पणीबाट मुक्त हुने राम्रो अवसर दिनेछ। ठूलो योजना र विचारहरू भएको कसैसँग तपाईँको आकर्षण हुनेछ – कुनै पनि निवेश गर्नुअघि व्यक्तिको विश्वसनीयता र प्रामाणिकता प्रमाणित गर्नुहोस्। शिशुको रोगले तपाईंलाई संलग्न राख्नेछ। तपाईंले यसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। उचित सल्लाह लिनुहोस् किनकि तपाईंको तर्फबाट अलिकति लापरवाही हुनाले समस्या अझै बढ्न सक्छ। आज आफ्नो प्रेमीलाई निराश नबनाउनुहोस् किनकि पछि पछुताउनु पर्न सक्छ। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग प्रेम गर्ने प्रशस्त समय पाउनु हुनेछ, तर स्वास्थ्यमा केही समस्या हुन सक्छ।
मानसिक शान्तिको लागि आफ्नो तनाउ बाहिर निकाल्नुहोस्। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। तपाईंको ज्ञान र राम्रो हास्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। तपाईंका मुस्कानको कुनै अर्थ छैन – तपाईंका हास्यको कुनै आवाज छैन – तपाईंलाई सामिप्य नहुनाले मुटुले धडकन बिर्सन्छ – आज उँचो प्रदर्शन र उँचो प्रोफाइलको लागि दिन हो। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। गलत सञ्चारले आज केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ, तर तपाईंले यसलाई बसेर बातचीत गरेर समाधान गर्न सक्नु हुनेछ।
असुविधाले तपाईंको मानसिक शान्तिमा बाधा दिन सक्छ तर एउटा मित्र तपाईंको समस्या समाधान गर्न अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। तनाउ हटाउन केही मन्द संगीत सुन्नुहोस्। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। प्रेम सम्बन्ध बारे चर्को हल्लाखल्ला नगर्नुहोस्। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। तपाईं र आफ्नो साथीबीच आज फरक सोच हुनाले तर्क हुन सक्छ।
तपाईंको मनले राम्रा कुराहरू सुन्नेछ। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। तपाईंका आँसु कुनै विशेष मित्रले पुछिदिन सक्छ। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।